Umsebenzi kaMbhishobhi omkhulu uDesmond Tutu ngamuva kokulwa nobuhlanga
Umsebenzi kaMbhishobhi uDesmond Tutu ngamuva Kokulwa Nobuhlanga
Ngisho nangemva kokuba ubandlululo luqedwe, uMbhishobhi omkhulu uDesmond Tutu wayazi ukuthi umsebenzi wakhe awukude. Wayesenalo iphupho lokuthula emhlabeni futhi wagxila ekusakazeni umlayezo wakhe nokwakha ifa lakhe. Ngo-1998 wabambisana no-Desmond Tutu Peace Centre (DTPC) nomkakhe uLeah.
Isikhungo saqala umsebenzi wakhe e-Orlando West, eSoweto ngaphambi kokunyuka eKapa ngonyaka ka-2000. Isikhungo esiseKapa saqala ukuqalisa uhlelo lokuPhumela koMholi. U-Tutu ngokwakhe uthintana naye nezimpande zakhe njengomfundisi.
Wafundisa e-Episcopal Divinity School eCambridge, eMassachusetts ngo-2002. Ngo-2003 wafundisa eNyuvesi yaseNorth Carolina futhi ngo-2004 wabuyela e-alma mater yakhe, i-King's College London, njengomprofesa ovakashele. Wabe esebenza njengomprofesa ohambele iminyaka emibili e-Emory University e-Atlanta, Georgia lapho efundisa khona inkolo.
Imikhankaso Yomhlaba Wonke Yokuthula
U-Tutu wagcina isimo sakhe sokukhuluma ngokweqile ezindabeni zomhlaba ezithintekayo. Wasebenzisa ngokugcwele isikhundla sakhe ukwenza konke okusemandleni akhe ukudala izwe elingcono. Lokhu kuhlanganisa: Ngo-2006 uTutu waqala umkhankaso womhlaba wonke wokulwa nokuhweba izingane ngokubhalisa zonke izingane ngesikhathi sokuzalwa.
Ngo-2008 uTutu wajoyina umbhikisho waseTibetan eSan Francisco phakathi neMibhikisho yaseTibetan. Ngombhikisho, wabiza izinhloko zombuso ukuthi zihlukumeze umkhosi wokuvulwa kwama-Olimpiki asehlobo lase-2008 eBeijing ngenxa yabantu baseTibetan.
Ngo-2009 wasiza ukusetha iKhomishana yeQiniso neKubuyisana eSolomon Islands eyayiqondisa iKhomishini yaseNingizimu Afrika yokuQinisekisa nokuQinisekisa. UTutu wajoyina iNkomfa YeZizwe Ezihlangene nge-Climate Change ngonyaka ka-2009 lapho ebiza khona ukuthungathwa kwamafutha.
Ngo-2017 uTutu wajoyina ama-10 Nobel Peace Prize, ecela uSaudi Arabia ukuba amise ukubulawa kwabafana abangu-14 ababambe iqhaza emibhikishweni yaseSaudi Arabia kanti kamuva lowo mholi wacela umholi waseMyanmar ukuba ayeke ukushushiswa kwe-Muslim Rohingya.
Ukubandakanyeka ngezindaba zezempilo
Njengoba uTutu athola ukuthi unesifo somdlavuza we-prostate futhi wabhekana nokugula kabi ngesikhathi sakhe ekhonza iKhomishani yeQiniso nokubuyisana phakathi neminyaka yama-1990 uye wahlanganyela ngokujulile ezindabeni zezempilo. Wabeka ukunakekelwa kwe-HIV / AIDS kanye nesifo sofuba (TB). Ngo-2004 i-Desmond Tutu HIV Foundation yasungulwa ngokuhlonipha kwakhe.
Isisekelo saqala ngokucwaninga nge-HIV futhi saqhubeka nokufaka ukwelashwa kwe-HIV, ukuvimbela nokuqeqeshwa nokuqapha ukwelashwa kwe-TB. UTutu ubelokhu ekhuluma ngokukhathazeka kwakhe ngesifo segciwane lesandulela ngculaza, ngisho nokuveza ukukhathazeka kwakhe lapho uPapa Benedict XVI ekhethiwe.
UPapa waziwa ngokuzimela ngokuqondene nobulili kanye nezindaba zobulili kanti uTutu wabonisa ukukhathazeka ukuthi isonto lamaRoma Katolika lalizoqhubeka nokuphikisana nokusetshenziswa kwamakhondomu. UTutu naye waba ngumphathi weSouth African Prostate Cancer Foundation.
Ngo-2014 uTutu wabeka ukuthi wayengakholelwa ekulondolozweni kwempilo ngazo zonke izindleko. Ube ngumsekeli wezomthetho osize ekufeni futhi wathi uzofuna ukhetho ukuthi lube khona kuye.
Umphathisihlalo wabantu abadala
Ngonyaka ka-2007 uTutu wakhethwa njengesihlalo sabadala, iqembu labaholi bezwe abaqoqele ukufaka isandla ekuhlakanipheni, ekuhlakanipheni, ebuqotho nasezindinganisweni zokuxazulula izingxabano zomhlaba. Amanye amalungu afaka uNelson Mandela (owayengumongameli waseNingizimu Afrika), uJimmy Carter (owayengumongameli waseMelika), uKofi Annan (owayenguNobhala Jikelele we-UN) noMary Robinson (owayengumongameli wase-Ireland).
Uholele ekuthumeni kweqembu lokuqala eDarfur eSudan ngenhloso yokusiza ukuxazulula izingxabano lapho. Abadala bavakashela i-Ivory Coast, eCyprus, Ethiopia, eNdiya, eSouth Sudan naseMpumalanga Ephakathi. UTutu wehla esikhundleni sakhe ngo-2013.
Ukusekela amalungelo obutabane
I-Tutu ihlonishwa kabanzi ngokusekelwa kwakhe kwamalungelo gay. Lesi kwakuyisimo sokuphikisana naye sokuba athathe inhlangano yakhe yenkolo. Noma kunjalo, uTutu umi ngokuqinile ukuthi ukubandlulula ngenxa yocansi kuyalingana nokubandlulula ngenxa yombango noma ubulili.
Wahamba waze wabhalela uGeorge Carey incwadi emva kweNgqungquthela yamaBhishobhi ye-Lambeth ka-1998 lapho kwaqinisekiswa khona ukuthi isonto liphikisana nemishado efanayo yobulili obufanayo. Encwadini, uTutu uthe wayenamahloni ukuba yi-Anglican nokuthi uma abakwa-Conservatives bengathandi ukubandakanywa bangashiya.
Usola isonto ngokugxila ngobungqingili. "Uma uNkulunkulu, njengoba bekusho, engabandlululo, angizange ngikhulekele uNkulunkulu." - UDesmond Tutu
U-Tutu ubelokhu enesithakazelo enkulumweni yase-Israel nePalestina futhi wakhuluma ngakho ngenkathi ubandlululo lwalugcwele ngokugcwele. Ngemuva kokuwa kobandlululo wagcina le nzalo.
Ngo-2002 wanikeza inkulumo lapho egxeke khona ngokucacile inqubomgomo yakwa-Israyeli ephathelene namaPalestina futhi ecela izigwegwe ezweni.
Waqhathanisa lesi simo nesistimu yobandlululo. Uzohola inhlangano yeZizwe Ezihlangene eGaza Strip ngemuva kokuthi amabutho ase-Israel abulale abantu abangu-19 ngo-2006, kodwa waxoshwa ngemuva kokuba u-Israyeli enqabe ukumnika imvume.
Ukubuza ngempi Yase-Iraq
Ngo-2003 uTutu wabamba iqhaza emibhikisho ngokumelene nezinhlelo ze-United States zokuqalisa i-Iraq War. Ngaphandle kokubonakaliswa kweNew York lapho ayebandakanye khona naye wathintela ucingo uCondoleezza Rice, ecela ukuthi uhulumeni wase-US avimbele ukuya empini. Wabuza ukuthi kungani i-Iraq ihloselwe ukuba nezikhali ezifanayo zaseYurophu, eNdiya nasePakistan.
Ngo-2004 wabonakala ekukhiqizeni okungahambisani ne-Off-Broadway, okuthiwa iNhlonipho Bound Yokuvikela Inkululeko, eyayigxeka ukuboshwa kukahulumeni wase-US ejele laseGuantanamo Bay.
Wayekhuluma ngokuphikisana kwakhe ngesikhathi eboshwe ngaphandle kokuvivinywa kwabantu abasolwa ngokugandelela emazweni ase-United States nase-UK, ngokuqhathanisa nokuvimbela lokho okwenzeka ngesikhathi sobandlululo. Ngo-2012 wabiza uGeorge W. Bush noTony Blair ukuba bavivinywe yiNational Criminal Court ngokuqala i-Iraq War.
Ukuhluza abaholi abasha baseNingizimu Afrika
Nakuba kuthokozile ukuthi uhulumeni waseNingizimu Afrika ocindezelayo ubekwe phansi ngo-1994, uTutu wayeqaphele ukuba aqaphele imisebenzi kahulumeni omusha futhi akazange anganqikazi ukubiza amaphutha ayewubonile.
Ezinye zezinto ayezibuza mayelana nohulumeni omusha zazibandakanya ukusetshenziswa kwezimali ezisekelweni zikahulumeni kaRobert Mugabe eZimbabwe kanye nomdwebo wezikhulumi ze-Nguni ukulawula isikhundla sezombusazwe.
Usole uThabo Mbeki ngokumangalela ukulalela kwamalungu e-ANC futhi wamgxeka ngokungabheki ngokwanele ukwanda kwegciwane lesandulela ngculaza nengculaza. U-Tutu uphinde wamgxeka uJohan Zuma, owamlandela, ngokuziphatha kabi ngokobugebengu ngesikhathi icala lokudlwengula nokukhwabanisa limelene naye.
Ukuthatha umhlalaphansi kaTutu
UTutu washiya umhlalaphansi emphakathini ngo-2010 eneminyaka engama-79. Waqhubeka nomsebenzi wakhe ngaphakathi kweThe Elders noNobel Laureate Group futhi wasekela i-Desmond Tutu Peace Centre, kodwa wasula esikhundleni sakhe njengoNxankulu waseNyuvesi yaseWestern Cape nommeleli ikomidi lezeluleko zeZizwe Ezihlangene ekuvimbeleni uhlanga.
Uthole isimo sezithombe eNingizimu Afrika futhi saqashelwa ngezidakamizwa eziningi ezihlonishwayo, kanye nemiklomelo efana neNobel Peace Prize kanye neMedical Presidential Medal of Freedom.